China Welding Robot Series fekitari uye bhizimisi | Daya
Welding robhoti dzakatevedzana JZJ06C-180
Welding robhoti akatevedzana JZJ06C-144
Welding robhoti dzakatevedzana JZJ06C-160
Welding robhoti dzakatevedzana JZJ06C-200
Welding robhoti irobhoti remaindasitiri rinoshanda mukuwacha (kusanganisira kucheka nekumwaya). Zvinoenderana nedudziro yesangano repasi rose reStandization (ISO) rekuti maindasitiri robhoti ndeyeyeyakajairwa kutema robhoti, irobhoti remaindasitiri chinhu chakasiyana-siyana, chinodzokororwa chinogadziriswa chinogadziriswa chine matemo matatu kana anopfuura anogona kugadzirirwa, ayo anoshandiswa mumunda weanosimbisa michina. Kuti ugone kuchinjika kune akasiyana maficha, mechiniki interface yeiyo yekupedzisira axis yerobhoti inowanzo kuve yekubatanidza flange, iyo inogona kuve yakabatana nemhando dzakasiyana maturu kana magumo maactor. Welding robhoti ndeyekuisa iyo yekunamatira tambo kana yekunamatira (kucheka) pfuti kumagumo mugodhi flange yeindasitiri robhoti, kuitira kuti igone kuita kutenderera, kucheka kana kupisa kupisa.
Robhoti Welding ndiko kushandiswa kweanogadziridza maturusi ekugadzirisa (marobhoti), ayo anonyatso shandisa nzira yekutungidza neese ari maviri kuita weld uye kubata chikamu. Maitiro akadai segesi simbi arc yekumhanyisa, nepo ichizowanzoitwa otomatiki, hazviite hazvo kuti ienzane newirobhoti yekuwelda, nekuti munhu anoshanda anombogadzirira zvinhu zvinofanirwa kusunganidzwa. Robhoti Welding inowanzo shandiswa yekushomeka nzvimbo yekumwaya uye arc welding mune yakakwira kugadzirwa kunyorera, senge mota indasitiri.
Robot Welding ingori nyowani nyowani yekushandisa robhoti, kunyangwe hazvo marobhoti akatanga kuunzwa muUS indasitiri muma1960. Iko kushandiswa kwemarobhoti mukushambadzira hakuna kutora kudzamara kuma1980, apo indasitiri yemotokari yakatanga kushandisa marobhoti zvakanyanya pakuona nzvimbo. Kubva ipapo, ese maviri marobhoti anoshandiswa muindasitiri uye huwandu hwekushandisa kwavo hwakura zvakanyanya. Muna 2005, marobhoti anopfuura zana nemakumi maviri ezviuru aishandiswa muindasitiri yekuNorth America, ingangoita hafu yadzo kuwelda.  Kukura kunonyanya kuderedzwa nemhando yepamusoro yemidziyo, uye zvinokonzeresa kurambidzwa kune epamusoro-ekugadzira maficha.
Robhoti arc kutenderera kwatanga kukura nekukurumidza munguva pfupi yapfuura, uye yatove inoraira nezve 20% yeanoshanda emarobhoti ekushandisa. Izvo zvikamu zvikuru zve arc welding marobhoti ndiwo maneja kana echimakanika unit uye anodzora, anoita se "robhoti" rerobhoti. Iyo manipulator ndiyo inoita kuti robhoti rifambe, uye dhizaini yeaya masisitimu anogona kuiswa muzvikamu zvakajairika, senge SCARA uye cartesian coordonate robhoti, iyo inoshandisa akasiyana ekubatanidza masystem kutungamira maoko emuchina.
Welding Robhoti Series technical Parameter
Pashure: Matanhatu akabatana Robhoti Series
Zvadaro: Tsikwa Die